जनता बैंकद्वारा सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान शुरु
काठमाडौं । नेपाली जनताको लोकप्रिय बैंक जनता बैंकले आम उपभोक्ताहरुलाई मध्यनजर गर्दै सबै नेपालीको बैक खाता शुरु गरेको छ । नेपाल सरकारले आइतबार एक समारोहका बीच शुभारम्भ गरेको सबै नेपालीको बैंक खाता अभिय...
खर्चमा अर्थ मन्त्रालयकै छाडापन
काठमाडौँ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयको खर्च गराइमा छाडापन देखिएको छ । अर्थले खर्चमा लापरबाही गर्दा उसको बेरुजू क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ भने...
बैंक खाता अभियान: प्रधानमन्त्री ओलीले खोलिदिए बुबाको खाता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘खोलौं बैंक खाता’को शुरुवात आफ्नो बुबाको खाता खोलिदिएर गरेका छन् । ‘समृद्धिसँग जोडौं नाता सबै नेपालीको बैंक खाता’ भन्ने नाराका साथ शुरु गरिएको अभियानको प्रध...
यो बर्षबाट एक नेपालीको थाप्लोमा ३१ हजार सात सय ५० रुपैयाँ ऋण
काठमाडौँ । महालेखा परिक्षण कार्यलयले आज (शुक्रबार) आव २०७५ / ७६को आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार नेपालीहरुको ऋणको भार बढेको देखिएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार यो बर्षबाट एक नेपालीको थ...
नेपाल टेलिकमको नयाँ वर्ष अफर, २ सयमा ३ जीबी डाटा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्षको सन्दर्भमा उपभोक्ताको थप सुविधाका लागि नयाँ वर्ष अफर २०७६ सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै २ सय रुपैयाँको 'प्याक अफर' योजना सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल ...
नयाँ वर्षदेखि खोलिने बचत खातामा बैंकले नै १०० रुपैयाँ हालिदिने
काठमाडौं । नेपाल बैकर्स एसोसिएसनले नयाँ वर्ष(बैशाख १ गते)देखि खोलिने बैंक खातामा १ सय रुपैयाँ राखिदिने सहमति गरेको छ। हिजो (बुधबार) बसेको एनबिएको बैठकले सरकारले तय गरेको सबै नेपालीको बैंक खाता कार्या...
दक्षिण एसियामा उच्च आर्थिक वृद्धि हुने मुलुकहरुमा नेपाल तेस्रो स्थानमा
काठमाडौं । यस वर्ष नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो उच्च आर्थिक वृद्धि हुने मुलुक बन्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । सोमबार दक्षिण एसिया आर्थिक फोकस सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालमा यो वर्ष (सन् २०१९मा) ६...
शुक्लाफाँटा पर्यटन महोत्सव समापन झण्डै दुई हजारले गरे निकुञ्ज अवलोकन
महेन्द्रनगर । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आयोजना गरिएको शुक्लाफाँटा पर्यटन महोत्सव बिहीबार समापन गरिएको छ । महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमु...
भाटभटेनी मनी ट्रान्सफर र सिभिल बैंक लिमिटेड सम्झौता
काठमाडौं । भाटभटेनी मनी ट्रान्सफर र सिभिल बैंक लिमिटेडबीच विप्रेषण कारोबार सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बुधबार एक कार्यक्रमका बीच सम्झौता पत्रमा सिभिल बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गु...
लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा प्रि–लगानी सम्मेलन हुँदै
काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा प्रि लगानी सम्मेलन हुँदै छ । विहिबार राजधानीको एक होटलमा मध्यान्ह हुने प्रि–सम्मलेलनमा परिचयात्मक कार्यक्रमका साथै सहभागीहरुबीच विभिन्न क्याम्पमा छलफल...
लगानी सम्मेलन महत्वपूर्ण अवसर हो: अर्थमन्त्री
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई पहिल्याउन लगानी सम्मेलन महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा बुधबार आयोज...
१ सय ५५ वटा मुलुकसँग व्यापार घाटा बेहोर्दै नेपाल
काठमाडाैं । बढ्दो आयात तर निर्यात स्थिर रहँदा चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा १ सय ५५ मुलुकसँगको व्यापारमा नेपाललाई घाटा छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार नेपालले एक सय ८४ मुलुकसँग द्व...
प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ३२ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्म प्रतिव्यक्ति ऋण ३२ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा आव ०७५ र ०७६ को पहिलो ८ महिनासम्म देशको कुल ऋण दायित्व ...
काठमाडौं । नेपाल र जापानबीच सोमबार श्रम सम्झौता हुँदैछ । नेपाली श्रमिक जापानमा लैजानको लागि नेपाल र जापानका बीच श्रम सम्झौता ‘एमओसी’ मा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । जापानले कृषि, मत्स्यपालन, औद्योगिक, ह...
काठमाडौं । बढीमा तीन महिना भित्र आइपुग्ने भनिएको नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म ३५ किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालन गरिने रेलसेवा भारतको चेन्नईस्थित सरकारी कम्पनीले निर्माण गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्...
धनुषा । धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका, ५ मा पर्छ— शान्तिपुर गाउँ । बैंकका कर्मचारीले यो गाउँमा पाइलो टेके कि, शान्तिपुर अशान्त बन्छ । बैंकसँग ऋण लिएकाहरू भागाभाग गर्छन् । कसैले घरको ढोका थुन्छन् त कोही ...
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज(सोमबार) रु. १३ अर्ब ७९ करोड ११ लाख २५ हजार बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले एक सूचनामार्फत उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बोलकबोल प्रक्रियाबाट बिक्री गर्...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार युद्धले सन् २०१८ मा अमेरिकी अर्थतन्त्र करिब सात अर्ब ८० करोड डलर खुम्चिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रीहरुले गरेक...
काठमाडौं । युरोपको लोकप्रिय फोटोकपी पेपर आइ क्यु प्रिमियम र माएस्ट्रो सुप्रिमको काठमाडौंमा विक्रि शुरु गरिएको छ । अष्ट्रियाको मोन्डि ग्रुपले फोटोकपी पेपरको उत्पादन गर्दै आइरहेको हो । आज काठमाडौंमा एक ...